Ahoana no ho Very amin’ny Lehilahy ao anatin’ny folo Andro YIFY dikanteny
Benjamina Barry dia ny dokam-barotra mpanatanteraka sy ny vehivavy’ ny olona izay, mba handresy ny be fampielezan-kevitra, filokana fa izy dia afaka manao ny vehivavy ho tia azy ao anatin’ny folo andro katroka. Andie Anderson manarona ‘Ny Fomba’ nikapoka ho ‘Tony’ ny gazetiboky sy voatendry mba hanoratra ny lahatsoratra momba ‘ny Fomba Very ny Lehilahy ao anatin’ny folo andro.’ Mihaona ao amin’ny bar fotoana fohy taorian’ny bet no natao. Matio McConaughey sy Kate Hudson dia mahafatifaty miaraka, fa izy ireo dia tsy afaka mandresy ny Fomba Very ny Lehilahy ao anatin’ny folo Andro’ adaladala horaisintsika sy mialoha script. OK, mba ho marin-toetra tsy manantena be avy ity sarimihetsika, ny maha-pitiavana hatsikana sy ny rehetra, saingy amin ny farany raha ny marina aho tia azy, eny, ny zana-borona flick, ary eny ny sasany ny zavatra ao aminy dia tsy tena hitranga amin’ny zava-misy, ary ny sarimihetsika ho tena mamy sy mahafinaritra, ny mifarana mety ho kely kokoa, fa hithes karazana sarimihetsika foana ny zavatra izay te-ho hafa, rehetra izao amin’ny rehetra aho, tena tia, ary mankafy mijery azy hatrany hatrany. Kate Hudson tena mamirapiratra ao amin’io hazavana panahy hatsikana, ary izaho ho an’ny olona iray te-hahita azy bebe kokoa ao mampihomehy, mahatsikaiky toy izany. Andie(Kate Hudson) dia tovovavy tsara tarehy izay miasa ho an’ny vehivavy ny gazety antsoina hoe Tony, ary ho azy ny lahatsoratra manaraka, Andie no manoratra momba ny fomba very ny lehilahy ao anatin’ny folo andro katroka. Ben(Matio McConaughey)dia ny dokam-barotra mpanatanteraka ary izy no mahatonga ny miloka amin’ny namany fa afaka manao ny vehivavy ho tia azy ao anatin’ny folo andro katroka. Mazava ho azy, ireo roa mihaona tsirairay sy ny scam eo. Andie hanao na inona na inona ho very ny lehilahy sy ny Ben dia tsy manao na inona na inona mba handresy ny zazavavy, izay tsy manantena fa ny roa amin’izy ireo dia raiki-pitia amin’ny tsirairay. Nihevitra aho fa izany dia mampihomehy sy mahafatifaty tantaram-pitiavana hatsikana. Ny mahafinaritra Kate Hudson manome fampisehoana lehibe, dia tena mahatsikaiky. Tiako ny hanome ny Fomba Very ny Lehilahy ao anatin’ny folo Andro fito. Ny zava-misy dia, efa tsy natao mba jereo ity horonantsary ity hatramin’izay.
Fa ny vadiny nahita azy, ary tia azy. Indray hariva izy tratra ahy ao amin’ny mellow fihetseham-po, ary nijery aho dia niaraka taminy. Mba hiteny izany dia sarintsariny dia understatement. Mba hiteny izany amin’ny ankapobeny mialoha dia ny toetry ny mazava. Izany dia tapa-fluff-pitiavana comedy mahazatra ny mpijery azy ny antitra sarimihetsika. Fa misy be dia be ny olona izay TE-fluff, ary amim-pahatsorana, mino aho fa isika dia mety mijery izany indray indray andro any. Ny fanoratana dia indraindray fisainana, matetika mampihomehy ary indraindray ny lohalika-clappingly mahatsikaiky, tsy degenerating ho tanteraka adaladala. Ny simia eo Kate sy Matio dia lehibe, ary ny fampisehoana ireo izay nanao ity sarimihetsika hitsangana ambony ny mediocre. Aza mandany fotoana amin’ny sarimihetsika izany raha toa ka mikiry amin’ny lalina, na hahatakatra ny fahamarinana rehetra — dia tsy hitranga’. Fa raha te-tsara ny fotoana tamin’ny mahafatifaty flick, afaka manao ny ratsy. Benjamina Barry dia ny dokam-barotra mpanatanteraka sy ny vehivavy’ ny olona izay, mba handresy ny be fampielezan-kevitra, filokana fa izy dia afaka manao ny vehivavy ho tia azy ao anatin’ny folo andro katroka. Andie Anderson manarona ‘Ny Fomba’ nikapoka ho ‘Tony’ gazety, ary dia nasaina nanoratra lahatsoratra iray ao amin’ny ‘ny Fomba Very ny Lehilahy ao anatin’ny folo andro.’ Izy ireo azo antoka fa mahafeno ny tsirairay ao amin’ny trano fisotroana sy ny samy miezaka ny hahazo izay tiany raha tsy misy ny fahafantarana ny zavatra izy ireo dia tena manao. Izany no iray amin’ireo mampitokiky pitiavana mahatsikaiky, raha tianao ny sasany mihomehy. Misy maro mihomehy-avy-mafy ny fotoana sy eroa. Ny fanaovana vazivazy dia ny fisainana sy ny slapstick, izay tiako amin’ny fampihomehezana. Aza mijery ity horonantsary ity raha te-lainga eo amin’ny olon-tiany fa raha tianao ny hanana ny tena tsara ny fotoana, dia ity no ilay horonan-tsary.
Noho izany, ny fluffy ary mialoha
Tena tsy azo tanterahina sy ny marary, ary mamy. Iza no miraharaha? Ity horonan-tsary ity miseho ho tsy misy zavatra bebe kokoa noho izay natao? Mazava tantaram-pitiavana hatsikana. Hatramin’ny kintana toy ny Cary Grant, Kathrine Hepburn sy Irene Dunne, misy jiro ka ny cinema efijery ao amin’ny ‘s amin’ny sarimihetsika tahaka ny An’ Ny Marina, nitondra ny Zazakely sy ny toerana Tena Ny Vadiny, Hollywood ary mazava ho azy ny sarimihetsika mandeha ny vahoaka efa nanokana toerana manokana ao am-pony ho Romcoms, screwballs sy ny ady ny vavy mahatsikaiky. Mitovy ny teti-dratsin’ny, Mitovy vazivazy fa tsy misy ny tsy vazivazy sy ny teti-dratsin’ny fa dia tsy mandeha avy ny fomba sy ny ho foana manan-danja eo amin’ny sokajin-taona rehetra, na toerana, na New York ny ‘s na ny New York amin’ny andro ankehitriny. Hollywood niasa foana ny fototry fa mifikitra inona no notsapaina sy nosedraina, ary efa nanaporofo ny asa, fa dia nahoana no amin’ny tetika kely ny fiovana sy ny rehash ny vazivazy taloha sy ny toe-javatra izy ireo dia afaka ny reinvent ny sarimihetsika ho an’ny taranaka vaovao ny horonan-tsary ho fantatr’ireo olona tia. Izany dia amin’ny alalan’ny ity raiki-pohy izay Doris Andro sy ny namany dia afaka manohy Romcom tantara manerana ny ‘s ary ny tsirairay amin’izy ireo biraon’ny boaty mpandresy. Ohatra iray tsy ela akory izany no ho Midina amin’ny Fitiavana starring Ewan McGregor sy Rene Zellweger. Izay tsy afaka hahita ny tetika fampitahana ny Ondana Miresaka na Tia ho Tonga Indray? Na izany aza dia tsy manao horonantsary ity izay tsy dia mahafinaritra. Ny fialam-boly miankina amin’ny nahita ny mpilalao ny andro mameno ny andraikitra lehibe mpilalao ny omaly sy ny fomba ny soratra sy ny vazivazy dia mifanaraka sy nolazaina tao anatin’ny resahana ny sty taonjato ny fiainana sns. Matio McConaughey sy Kate Hudson nanao ity horonan-tsary amin’ny impeccable tantara an-tsary fotoana sy mahafinaritra ny fampisehoana. Mazava ho azy, miaraka amin’ny Goldie Hawn ho an’ny reny iray, Hudson tonga mahitsy avy amin’ny tantara an-tsary tahiry noho izany dia mety ho diso fanantenana izy raha toa ka tsy mahafeno ny zava-tsarotra, saingy tsy nanao izany izy. Ny sasany ny endrika ary ananany efa ho efa ahy resy lahatra aho nijery ny tantara taloha ny ‘Mihomehy Amin’ Ity tetika toa tena tany am-boalohany, ary amin’ny maha-ady ny firaisana ara-nofo ny hatsikana, dia mahalana vao tonga tsara toy izany. Ankoatra izany, ny raiki-pohy dia nanaraka, ary izahay dia tsy eo ambanin’ny nofinofy momba ny zavatra ny vokatra farany dia mety ho, fa ny diany ho farany io toerana dia inona no hitantsika voly. Io karazana sarimihetsika efa malaza ho fitopololahy plus taona sy ny fitoviana no mahatonga azy ireo izany.
Fa tsy namelezany felaka ho azy ireo
Jereo ny sasany amin’ireo teo alohany sy mankasitraka ny loharano. Ho velom-pankasitrahana izy ireo dia mbola manao ireo karazana sarimihetsika ankehitriny toy ny tamin’ny vanim-potoana iray izay mandrahona ho nohanin action thrillers, fantasy sy ny tsimoka ‘ahy dehibe toa izany ihany ny fahasamihafana ankavia amin’ny sary mihetsika. Ny sary rehetra sy ny dikanteny dia zon’ny mpamorona ny fanajana ny tompony raha tsy voalaza raha tsy izany
Rencontre mitabataba tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana →